Cigarette fan အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာ ကားအတွင်း အေးမြစေဖို.
Cigarette fan လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
အဲယားကွန်း ခဏ ပျက်သွားသော ကားအတွက်
အေးအေးချမ်းချမ်း ကားအတွက် လေရဖို.
Cigarette fan လေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်မီးငြိအပေါက်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – 12000 kyats
sharp 110v. autoအဝတ်လျှော်စက်
အမည်: Cigarette fan